Umthandazo weminikelo kunye nezishumi. ? Umzekelo onamandla
Umthandazo weminikelo Ngexesha lokunikezela iimpahla zethu phambi kobukho beNkosi, kubaluleke kakhulu.
Iminikelo ingashiywa kwisibingelelo okanye kwigumbi lokugcina lecawe okanye sinokunika ngqo umntu othile kodwa kufuneka sihlale sikhumbula ukuba iNkosi ifanelwe yinxalenye yokufumana imali.
Lo ngumgaqo esiwubonayo eBhayibhileni kwaye osizisa iintsikelelo ezingenakubalwa ebomini bethu. Ekwenzeni umnikelo sinika ngobabalo oko sikufumanayo ngesisa kwaye kufanele kwenziwe ngentliziyo evuya kuba lo ngumnikeli osikelelekileyo weNkosi.
1 1) Umthandazo weminikelo kunye nezishumi
2 2) Umthandazo ukuze unikele kuThixo
3 3) Umthandazo ongumzekelo weminikelo
3.1 Uyintoni umthandazo weminikelo?
3.2 Ungayithandazela njani iminikelo yamaKristu?
1) Umthandazo weminikelo kunye nezishumi
Namhlanje sizisa okona kulungileyo kwingeniso yethu kunye nemveliso yethu.
Sibekele ecaleni isahlulo seenzuzo zethu, ngokomlinganiso osiphumelelayo.
Jonga ngolonwabo esikunikeza kona ngalo mhla.
Sithembise ngemilebe yethu ukuba siza kukukhonza, ke ngokuzithandela sizisa iminikelo yethu.
Siyaqonda ukuba eli lixesha elifanelekileyo phambi kwakho, kwaye siphatha ngentlonelo oko sikuhambisa namhlanje.
Thixo, sinika uzuko ngenxa yegama lakho; Kungenxa yoko le nto sizisa le minikelo size neenkundla zethu.
Enkosi ngokuhlaziya nokucoca ubomi bethu, kuba namhlanje siyaqonda ukuba le minikelo ibonelelwa ngobulungisa kukhulu nobungangamsha bakho.
Ngamana ukubonakaliswa konqulo lwethu kunokukholisa.
Sinika uzuko ngenxa yegama lakho njengoko sizisa iminikelo yethu kwaye uza phambi kobukho bakho; Siyakuthanda oh Lord!
Namhlanje siyonwabele ukufaka igalelo ngokuzithandela, kuba ngentliziyo epheleleyo sikwenza oku.
Thandaza lo mthandazo wezipho kunye nezishumi ngokholo olukhulu.
Iminikelo kunye nezishumi ngumgaqo webhayibhile owenziwa kuphela ngesityhilelo kuba ihlala ingumcimbi wokugxekwa ngubani onale migaqo kwaye uyisebenzise kubomi babo bemihla ngemihla.
Ebhayibhileni siyabona ukuba abantu abagcina izishumi zabo ngabantu abachumileyo kuyo yonke indlela yobomi.
Iminikelo inokuba yinto yonke evela entliziyweni yethu, kodwa izishumi, zeNkosi, zenza iipesenti ezilishumi zeenzuzo zethu, nokuba kukhutshwa imali okanye kungenjalo.
Ilizwi lisifundisa ukuba u-Thixo ngokwakhe uyamkhalimela lo mntu asidlayo nokuba nje sithatha izishumi ngokufika kwangexesha kwaye ngentliziyo egcwele uvuyo.
2) Umthandazo ukuze unikele kuThixo
«Enkosi ndiyabulela ngako konke ondinike kona, kuko konke ondikhulisileyo.
Ndiyazi ukuba ngamanye amaxesha andibuyi kakhulu kuwe, kodwa ngeli xesha ndiza kuba.
Yonke into endiyivune namhlanje ikhule kuwe.
Undenze umntu ongcono.
Enkosi kusapho lwam, kubahlobo bam, abantu bam abasondeleyo.
Enkosi ngokundinika omnye umhla wobomi,
Olunye usuku ngakumbi lokudumisa nokukuthanda, ukukuthanda.
Ngaphandle kwakho bekungayi kubakho mntu, enkosi Nkosi.
Andisoze ndihlawule ityala lam kuwe, ukukuhlawula ngayo yonke into ondinike yona.
Iminikelo, nokuba siyayishiya kwindawo yokugcina iimpahla okanye siyinike omnye umntu, ikwanguloThixo uyayamkelayo ezulwini kwaye uya kusinika umvuzo ngokobutyebi anabo ngokwakhe ngozuko.
Umnxeba kukwenza iminikelo ngentliziyo echwayithileyo kuba ilizwi lisixelela ukuba usikelela lowo uphayo ngovuyo ke asinakubanika into ngentliziyo egcwele ukrakra kodwa baneliswe yile nto siyinikelayo.
3) Umthandazo ongumzekelo weminikelo
Namhlanje sizisa iminikelo kunye nezibonelelo zethu ngokulungileyo kwingeniso yethu kunye nemveliso yethu.
Sibekele bucala icandelo lokufumana imali,
Owona mmandla usinike wona wokusenza siphumelele.
Jonga ngolonwabo kwaye uthande into esikunikeza yona ngalo mhla.
Sithembise ngemilebe yethu ukuba siya kukhonza,
Kungenxa yoko le nto sizinikezela kuthi ngokuzithandela nangokuzithandela.
Siyaqonda ukuba eli lixesha lomthendeleko phambi kwakho,
kwaye siphatha ngentlonelo kwaye sikukhathalela oko sikuhambisa namhlanje.
Thixo, sinika uzuko ngenxa yegama lakho;
Kungenxa yoko le nto sizisa le minikelo size kwitempile yakho.
Enkosi ngokuthambisa, ukucoca nokukhusela ubomi bethu,
kuba namhlanje siyaqonda ukuba le minikelo inikelwa ngobulungisa ubukhulu bakho nobungangamsha bakho.
Sinika uzuko ngenxa yegama lakho njengoko sizisa iminikelo kwaye sisiza phambi kobuso bakho, siyanqula wena Nkosi
Namhlanje siyonwabele ukubanegalelo ngokuzithandela nangokuzithandela, kuba ngentliziyo epheleleyo sikwenza oku.
Ngale ndlela sibona ukuba kwilizwi elinye likaThixo lizele yimizekelo engenakubalwa. Omnye wabo kwaye abomeleleyo simbona ku-Abraham omnye owaziwa ngokuba ngutata wokholo, wavavanywa kwaye wakwazi ukuhlangula unyana wakhe ukuba u-Lord ism akamnikanga mntwana wamthole.
Apha sibona umzekelo wentobeko kwaye ngolu hlobo kukho okuninzi esingakufunda kubo iimfundiso ezibalulekileyo ebomini bethu bonke.
Uyintoni umthandazo weminikelo?
Sithandaza ngexesha lokunikela ukuze INkosi ikusikelele into esiyenzayo. Ukuze sibe nguThixo omnye ophinda imali yethu, asikhokele ukuba simnike loo mntu uyifunayo kwaye sihlala sinomnqweno ezintliziyweni zethu wokunikela umnikelo
Kubalulekile ukwazi ukuba iminikelo ayisoloko inemali kodwa inokwenziwa ngayo nantoni na. Umzekelo kuqhelekile ukubona iziqhamo okanye iminikelo yeentyatyambo kwaye zonke zifunyenwe yiNkosi.
Ungayithandazela njani iminikelo yamaKristu?
Oku, njenge yonke imithandazoKufuneka yenziwe ukusuka ezinzulwini zeentliziyo zethu kwaye ukwazi ngokupheleleyo into esiyenzayo.
Amaxesha amaninzi, njengoko umnikelo yinto yokomzimba, asiqapheli ukuba sisenzo sokomoya kwaye lo ngumgaqo esingenakuwulibala nangayiphi na indlela kuba nguThixo ngokwakhe ofumana iminikelo yethu kwaye ozakusinika umvuzo ngokobutyebi bakhe uzuko
Ukuthandazela iminikelo yamandla kunye nezishumi zezinto ezenziwa ngokokholo, ukukholelwa ukuba nguThixo ngokwakhe osimamelayo kwaye nokuba unguye osinika impendulo yale nto siyicelayo, nokuba yeyokwenyama okanye yeyokomoya, kufuneka sihlale sithandaza sisuka emphefumlweni kwaye sixhumane ngqo naye wonke umdali onamandla kunye nomnini wezinto zonke .